Daawo+Waraysi: Weerar goor dhowayd ka dhacay Sweden iyo dhimasho badan - Hablaha Media Network
Daawo+Waraysi: Weerar goor dhowayd ka dhacay Sweden iyo dhimasho badan
HMN: Wararka ka imaanaya dalka Sweden ayaa sheegaya in ugu yaraan ay saddex ruux geeriyoodeen kadib marki baabuur kuwa xamuulka ah lagu jiirsiiyey dad marayey wadada Drottninggatan ee magaalada Stockholm, Iyadoo wararka qaar ay sheegayaan inay dhimashadu intaasi ka badan tahay.
Warbaahinta Sweden ayaa ku warramay in ay jiraan tira dad ah oo weerarka ku dhaawacmay. Booliska ayaa xiray goobta waxaana la maqlayey rasaas, Booliiska Sweden ayaa sidoo kale sheegay in dhowr qof oo kale lagu dhaawacay dhacdadan, oo ay sheegeen inay ku qeexayaan weerar argagixiso.
Wararki ugu danbeeyey ee weerarka ayaa waxaa ka Warbixiyey Cabdirahman Xassan Xudeyfi oo ah saxafi dagan magaalada Stockholm ee caasimadda dalka Sweden.
Dhinaca kale Goobjoogeyaal ayaa warbaahinta gudaha u sheegay inay arkeen baabuurka xamuulka oo si kula talo­gal ah loogu wado daaqadda dukaanka Ahlens, islamarkaana ay arkeen meydad badan oo dhulka daadsan. “Waxaa jira jahwareer, mana aqaan inta qof ee dhaawaca ah. Dad badan ayaa qaracsan” waxaa sidaas yiri Leif Arnmar oo ka shaqeeya dukaanka, kaasi oo la hadlay warbaahinta dowladda ee SVT.